तपाइँको ब्लगमा एक ट्विटर आइकन थप्नुहोस् Martech Zone
म ट्विटरमा चाहानु भएको भन्दा बढी समय खर्च गर्दिन, तर यसले आफैंमा एक महान उपकरणको रूपमा स्थापित गरेको छ - को साथ धेरै बिभिन्न प्रयोगहरू। मेरो लागि ती मध्ये एक प्रयोग यसलाई मेरो पोष्टहरू स्वचालित रूपमा घोषणा गर्न प्रयोग गरिरहेको छ ताकि मेरो कुनै पनि अनुयायीहरूलाई थाहा होस् जब मैले मेरो ब्लगमा प्रकाशित गरेको छु। यो WordPress को लागी ट्विटर अपडेटर प्लगइन को उपयोग गरेर स्वचालित छ।
यो यति मुख्यधारामा पुगेको छ कि मैले यसलाई मेरो संग्रहमा थप्ने निर्णय गरें फिड, ईमेल र मोबाइल आईकनहरू मेरो साइडबार मा। मैले एउटा आइकन फेला पार्न सक्दो प्रयास गर्नुहोस्, यद्यपि, मैले नेटमा कुनै पनि कुरा भेट्टाइन। त्यसोभए - मैले आफ्नै बनाउने निर्णय गरें:
नि: शुल्क लाग्छ सबै ट्विटर आइकनहरू डाउनलोड गर्नुहोस् र इलस्ट्रेटर फाईल पनि म तिनीहरूको डिजाइन गर्न प्रयोग गर्दछु। किनकि म ग्राफिक कलाकार होइन, मलाई कहाँ र कसरी तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ वा यदि तपाईं तिनीहरूलाई सुधार गर्नुभयो भने मलाई केही फरक पर्दैन। आशा छ, twitter हैन!
आफ्नै प्राप्त गर्नुहोस् ट्विटर टी-शर्टपनि!
टैग: ट्वीटर आइकनट्विटर इलस्ट्रेटर
यो प्रोग्राम डाउनलोड गर्नुहोस् जुन हामीले निर्माण गरेका छौं हाम्रो प्रोग्रामलाई ठीक गर्नका लागि?
तपाईंको सामग्री ताजा राख्नुहोस्! टिप्पणी सहित
मई 10, 2008 मा 3: 29 PM
राम्रो काम! यो जस्तै साझा गर्न धेरै उदार ...
मई 10, 2008 मा 6: 47 PM
धन्यवाद! यो सामान आफैंमा राख्नु कुनै रमाईलो छैन, स्टीव!
मई 11, 2008 मा 8: 11 PM
यी आईकनहरू साझा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ती भर्खरैको मात्र हो जुन मैले 'ट्विटर बक्सहरू' बाट परिवर्तन गर्न खोजिरहेको थिएँ अहिले सम्म।
मैले मेरो एक ब्लगको साइडबारमा आईकन थपें ​​र यो राम्रो देखिन्छ।
मई 12, 2008 मा 2: 23 एएम
मैले भर्खरै यो प्लगइन थपें ​​र मेरो ईमेल ठेगाना सम्झिन बाहेक मैले मेरो ट्विटर खाता (डोह!) सँग दर्ता गरें जसले एक पटक यस्तो व्यवहार गर्‍यो जस्तो लाग्छ जब मैले सही राख्दछु। धन्यवाद।
मई 12, 2008 मा 8: 03 एएम
प्रतिमा मनपर्‍यो! कसले जान्दछ, हुनसक्छ तपाईंले भर्खर नयाँ ट्विटर आइकन सिर्जना गर्नुभयो। मैले हेर्नुपर्नेछ कि म यो हप्ता पछि यसको सुरूवात हुनु अघि नयाँ वेब साइटमा निचोल्न सक्छु कि भनेर।
मई 13, 2008 मा 5: 37 एएम
प्रतीकहरू मनपराउँनुहोस्, तिनीहरूलाई साझेदारीको लागि धन्यवाद।
अगस्ट,, २०१ 14 2008:२१ अपराह्न
आइकन को लागी धन्यवाद। म यसलाई मेरो साइटमा प्रयोग गर्दैछु!
सेप्टेम्बर १,, २०११ 1::2008० अपराह्न
डग, के तपाईंले उत्तम गोली वा केही लिनुभयो? Cuz यो मात्र सही छ। म केवल मेरो व्यक्तिगत ब्लग र मेरो वेब डिजाइन ब्लगमा ट्विटर थप्नको लागि सोचिरहेको थिएँ। र BAM, तिनीहरू यहाँ छन्!
एकचोटि फेरि, तपाइँको सम्पर्क फारम प्लगइन जस्तै एक उत्कृष्ट र धेरै उपयोगी उपकरण।
धन्यवाद Joni! तपाईं धेरै दयालु हुनुहुन्छ।
सेप्टेम्बर १,, २०११ 29::2008० अपराह्न
वाह, उत्तम! मैले भर्खर ट्विटरमा केहि खोज्न छोडेपछि राम्रो ट्विटर आइकन फेला पार्न Google खोजें। राम्रो काम, र मैले यसलाई धेरै स्थानहरूमा प्रयोग गर्ने छ किनकि मसँग धेरै साइटहरू छन्।
तिमीलाई धेरै धन्यवाद!
मारियो सान्चेज क्यारियन
डिसे 21, 2008 मा 12: 18 AM
यो धेरै उदार प्रस्ताव को लागी धन्यवाद। मैले मेरो ब्लगमा छवि नक्शा लागू गरेको छु र यो आकर्षणको रूपमा काम गर्दछ।
फेब्रुअरी १,, २०११ 28:१:2009 अपराह्न
बाडेको मा धन्यवाद। मेरो लाइभ जर्नल प्रोफाइलमा एक ट्विटर आइकन प्रयोग गरियो।
मार्स 7, 2009 मा 12: 20 एएम
धन्यवाद, डग। हाल ब्लगरमा एउटा साइट सुरू गर्दैछु र म राम्रो ट्विटर आइकन खोज्दै थिएँ, यो पृष्ठ नतीजाको शीर्षमा आयो। धन्यबाद, फेरी, र तपाई निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि म यहाँ नियमित हुँ, यो साइट जानकारी र स्रोतको खजाना हो।
मार्स 8, 2009 मा 12: 47 एएम
ट्विटर छविहरूका लागि धन्यवाद - x० x proud० गर्वका साथ प्रदर्शनमा छ।
मार्क्स 18, 2009 मा 5: 02 PM
तपाइँको आईकन को उपयोग को लागी धन्यवाद।
म ट्विटर पनि हुँ।
आफ्नै ब्लग सुरु गर्न सिक्दै।
तपाइँको आइकनले फिचर गर्ने ठाउँमा अपडेटको लागि सम्पर्कमा रहनुहोस्।
मार्स 20, 2009 मा 1: 15 एएम
यी ट्विटर आईकनहरू उपलब्ध गर्नका लागि धन्यबाद। मैले भर्खर एउटा मेरो ब्लगमा पोष्ट गरें।